Iiplanga zeVenetian Blinds
I-bamboo Venetian Blinds
I-Basswood Venetian Blinds
Paulownia Wood Venetian Blinds
iimfama antique iinkuni
zipeyintwe iimfama zomthi
IPinewood Venetian Blinds
I-Ayous Wood Venetian Blinds
Wooden Blinds Slats
I-Ayous Wood slats
I-Paulownia Wood Slats
I-Faux Wood Blinds
IAluminiyam eyimfama eyimfama
Iimfama zomthi vs ukungaboni kweemfama-indlela onokukhetha ngayo?
Iimfama zeenkuni ezenziwe ngomthi zenziwe ngeplastiki eyi-100% kwaye zijongeka ngathi zingumthi wokwenene. Ngapha koko, ekuphela kwento esinokubaxelela yona ngaphandle kukujonga isiphelo se-slats, ukubona ukuba kukho iinkuni. Zikwindawo eyi-100% engenamanzi, oko kuthetha ukuba i-Faux Wood blinds ihamba kunye nokulula kwabo ukucoca indawo yokucoca. Ke ngoko, ezi blinds zilungele ukusetyenziswa kwigumbi lokuhlambela okanye ekhitshini, enyanisweni, nakweliphi na igumbi elimanzi. Kuba bengafumani nabuphi na ubumanzi, ezi blinds azizukugoba kwindawo ezinomswakama ezinjengezindlu zangasese.
Kodwa, xa kuthelekiswa ne-faux blinds kunye ne-real wood blinds, i-faux blinds zinzima.
Ngokweemfama zokwenziwa kweenkuni, zezona zinobunkunkqele kwaye zintle kuzo zonke iimfama, xa kuthelekiswa nezinto eziyimfama ezenziwe ngomthi, zahlukahlukene kakhulu kwaye indlela nganye yemveliso inokubonisa ubume obukhethekileyo beenkuni zokwenyani, ukongeza, iWood sisixhobo esigqibeleleyo sokugquma , kwaye iimfama ezenziwe ngomthi yenye yezona zinto zinokukhusela kwimfama. Oku kuthetha ukuba ungagcina ubushushu ekhayeni lakho ebusika naphandle kwehlobo, ugcine ubushushu obutofotofo ekhayeni lakho nokuba ungakanani na unyaka. Oku kuyakunciphisa amatyala akho ombane njengoko isidingo sakho sokufudumeza embindini okanye iifeni kunye nomoya oya kuncitshiswa, zikongela imali ekuhambeni kwexesha.
Njengamaphiko eenkuni angaboniyo, anokungalunganga, njengemveliso yendalo, kufuneka siqinisekise ukuba yonke imithi esiyithengayo inesidima kwaye ifunyanwa ngendlela eya kunciphisa ukonakaliswa kwendalo. Xa kuthelekiswa nezinto eziyimfama ezenziwe ngamaplanga, oku kukhokelela kumaxabiso aphezulu.
Nangona kungangabonakala kuninzi kakhulu phakathi kwezi ndidi zimbini, kufuneka sigxininise ukuba nokuba ukhetha ntoni (eyinyani okanye eyinyani), uyakumangaliswa lutshintsho lwezindlu kunye neefestile.
Ixesha Post: Jun-13-2020
kuqinisekiswe ukuba kunzima.
Inkampani yethu iya kuthatha inxaxheba Shang ...
Iimfama zomthi vs ukungaboni kweemfama-indlela yokwenza ...
IYangkou Twon, iSouguang City, Shandong, China
Sitsalele ngoku: 0086-15854887100